iPhone Igwefoto Nsogbu na Solutions
Ugbu a, ka anyị tụlee ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị nkịtị igwefoto nsogbu na iPhone ọrụ nwere ike na-eche ihu site n'oge ruo n'oge na ihe na-eme iji dozie ha. Lee ndị top 8 nkịtị igwefoto nsogbu na iPhones.
Black ihuenyo ma ọ bụ mechiri emechi oghere
Bịara ikiri / nke na-elekwasị anya photos
Flash-adịghị arụ ọrụ
Enweghị ike ịhụ igwefoto ngwa
Loose igwefoto oghere
Igwefoto ifriizi nke
Enweghị ike ịgbanwee n'etiti n'ihu ma n'azụ igwefoto
Photos na-acha odo odo haze na blemishes
Ugbu a, na anyị maara na ihe okwu ndị a, ka anyị na-aga site ọ bụla n'ime ha ma hụ otú anyị nwere ike isi dozie ha.
1. B enweghị ihuenyo ma ọ bụ mechiri emechi oghere
Ọ bụrụ na ị na-ahụ a nwa ihuenyo / mechiri emechi oghere, ị ga-eme ndị na-esonụ:
Gbaa mbọ hụ na igwefoto na-adịghị egbochi site ihe ọ bụla dị otú ahụ dị na ekwentị cover ma ọ bụ ikpe.
Kwụsịkwanụ igwefoto na ngwa ma malite ya ọzọ.
Ọ bụrụ na ndị n'elu nzọụkwụ abụọ anaghị arụ ọrụ, ahụ na-agbalị ibidogharịa ekwentị.
Ọ bụrụ na nsogbu ka nọgidekwara mgbe ahụ, ọ bụ oge ị kpọtụrụ Apple maka achọ n'ime ihe ọ bụla ngwaike metụtara nke na a ga-ekwe omume ndochi.
2. bịara ikiri / nke na-elekwasị anya photos
Ọ bụrụ na foto na ị pịa-apụta dị ka bịara ikiri ma ọ bụ nke na-elekwasị anya ahụ na-agbalị ndị na-esonụ iji dozie N'ỤLỌ NCHE A:
Hụ na gị na iPhone igwefoto oghere dị ọcha; i nwere ike iji a microfiber ákwà ọcha n'ihu na n'azụ igwefoto na wepụ ihe ọ bụla unyi na ị na-ahụ na igwefoto. Ma, ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe ọ bụla unyi n'ime igwefoto oghere ahụ kpọtụrụ Apple n'ihi na ihe enyemaka.
Jide n'aka igwefoto na-adịghị na-egbochi site ihe ọ bụla na ike-interfering na oge nke ịpị foto.
Gbalịa ka ịhazie-elekwasị anya site na ịme ọpịpị na ihe ihe, ma eleghị anya na foto na i pịrị e na-enweghị ihe kwesịrị ekwesị na-elekwasị anya.
Gbalịa ịmafe kwụsịrị HDR mma ma ọ bụrụ na ọ bụ, ọtụtụ ndị achọpụtala na-enye aka kwa.
3. Flash-adịghị arụ ọrụ
Bụrụ na flash na gị iPhone kwụsịrị na-arụ ọrụ ma ọ bụ ma eleghị anya, ọ na-aga anya ọ bụla otu oge ị pịa a foto, ọ bụ oge na ị ego gị flash ntọala. Pịa na akara ngosi maka flash, ndị nnọchiteanya nke àmụmà bootu, na n'elu aka ekpe nke ekwentị gị na ihuenyo na họrọ ọnọdụ maka flash dị ka gị mkpa.
4. enweghị ike ịhụ igwefoto ngwa
Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike ịhụ igwefoto ngwa ahụ ego ọ bụrụ na e egbochi site na mberede; aga Ntọala> Ozuruọnụ> Mmachibido na ego n'okpuru Kwe Ka iji hụ na igwefoto bụ on. Nke a kwesịrị idozi nke na ị ga-enwe ike ugbu a na-ahụ Igwefoto ngwa na menu na gị iPhone.
The mbipụta si 5 8 dị ka e depụtara n'elu
nwere ike ịbụ n'ihi nke a dị oké njọ ngwaike nke. Ọtụtụ ọrụ kọrọ na na ịlele ha achọtawo igwefoto unit na-rụrụ na na na a nta ego nke mgbali ha nwere ike ịhụ igwefoto ngwaike / oghere dara mbà n'obi n'ime iPhone ahu. Oyiyi n'okpuru na-akọwa nke a nke ọma.
The ụzọ dozie nke a ga-ma-eji dochie n'azụ igwefoto unit na gị iPhone onwe gị (na e nwere ọtụtụ DIY nduzi dị na internet) ma ọ bụ nanị kpọtụrụ Apple mere na ha nwere anya n'ime ya na dozie ihe iseokwu / nye gị a nnọchi - anyị nwere ike ikwu nke abụọ nhọrọ nke na ịkpọtụrụ Apple dị ka bụghị onye ọ bụla dị ntụsara na DIY usoro na ọ pụkwara n'ihu mmebi ngwaọrụ gị bụrụ na ọ bụghị mere nke ọma.
Olee otú iji igwefoto mma na gị iPhone 6 Plus
Na iPhone 6 na 6 Plus, Apple ẹkenam ụfọdụ ndị kasị akpali akpali ọhụrụ atụmatụ maka ya igwefoto. Ebe a na-atụmatụ ndị a na obere Nduzi na otú iji ha kwa.
Gbanwee ikpughe aka - Ugbu a, ị nwere ike ịtọ ikpughe maka otu akụkụ nke foto gị n'elu nke mwube-elekwasị anya ọzọ, onwe ha. Na-amalite site na ịme ọpịpị na-ejide ndị akụkụ nke ihuenyo na ị chọrọ ka ndị na-elekwasị anya n'ihi na mgbe ahụ otu ugboro na-elekwasị anya e setịpụrụ, nanị swipe elu / ala na ihuenyo brighten ma ọ bụ daa mbà n'obi oyiyi. Ị ga-ahụ a Sun icon-akpụ akpụ na a mmịfe egosi ego nke ikpughe.
Olee otú iji 'Self Ngụoge' - The igwefoto ugbu a na-abịa na a onwe ngụ oge dị ka nke ọma (3 ma ọ bụ 10 sekọnd) na ike na-enye aka ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịsee foto na gị na ya, karịsịa ìgwè photos. Ị pụrụ nanị ịtọ ngụ oge na pịa a foto comfortably, na-enweghị enyemaka nke onye ọ bụla ọzọ. Mgbe na igwefoto ngwa, ị dị nnọọ nwere pịa na onwe ngụ oge akara ngosi / button ka ya.
Oge Lapse video mma - Ọ na-enyere gị na adị video footage ka ​​ime ka video-apụta dị ka na-akpụ akpụ nnọọ ngwa ngwa. Ị nwere ike ịnweta nke a mma site na ndepụta nke égbè ụdịdị nke bụ nri na-esote na shutter button na ihuenyo. Ozugbo họrọ, ihe ọ bụla ọzọ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị agbapụ a nkịtị video. Ya mere, unu nanị nwere pịa na shutter bọtịnụ na Malite / nkwụsị na otu gbara video ga-esichara na-egwu na elu na-agba.
Agbatịnụ foto - Ugbu a, ị nwekwara ike iji akuku ọrụ bụghị naanị n'ihi na cropping kamakwa maka idozi foto gị. Nanị aga Dezie> akuku na ị ga-ahụ a Ịkpọ oku ọzọ na foto - bugharia Ịkpọ oku dị ka mkpa ịgbatị foto ugbu a.
Azọpụta gị photos akpaghị aka na iCloud - The ọhụrụ iCloud atụmatụ ugbu a na-ahapụ gị zọpụta a elu àgwà oyiri nke ọ bụla foto pịrị iji iPhone 6 Plus. Ihe niile i nwere ime bụ inwe ike nhọrọ nke iCloud Photo Library si Ntọala. Ọ bụla edits na ị na-eme na foto gị ga-ozugbo emelitere na iCloud. Bụghị na ebube?
Full Solutions ka "Chọta My iPhone" Nsogbu
Top 4 Ụzọ Factory Tọgharia iPhone
Olee otú Dochie Broken iPhone 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS / 3G Home Button
Olee otú mmekọrịta Abụọ iPhones ka Onye Computer
Olee otú mbupụ ndabere faịlụ site iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4S
> Resource> iPhone> iPhone Igwefoto Nsogbu na Solutions